Xildhibaan ka tirsan Barlamanka oo lagu jirdilay Garoonka Muqdisho | raascasayrmedia.com
← Boosaaso:Wasiirka Aminga Puntland”Ssc,Raascasayr State Puntland Kama Tirsana”
Farmaajo oo ka qeyb galaya Caawa shir QM uga furmara New York →
May 10, 2011 · 12:08 am
Xildhibaan ka tirsan Barlamanka oo lagu jirdilay Garoonka Muqdisho
Mudane ka tirsan Barlamanka KMG Soomaaliya ayaa galabta jirdil loogu geystay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho xili uu doonayay in uu ka dhoofo garoonkaasi.
Xildhibaan Max’ed Mursal oo horay u ahaa wasiirka hantida qaranka xukuumadii Cumar C/rashiidCalisharma’arke ayaa galabta waxaa is hortaag ku sameeyay xili uu doonayay in uu ka dhoofo garoonka Muqdisho ciidamo booliska dowladda KMG Soomaaliya.
Waxaa la sheegay in xildhibaanka uu isku dayay in uu ka dhoofo garoonka saacado kadib markii ciidamo kale oo ka tirsan dowladda ay u diideen gudiga doorashooyinka madaxtinimada in maanta ay ka dhoofaan garoonkaasi.
Xildhibaan Max’ed Mursal ayaa oo Caawa Shabelle la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in jildil xoogan uu u geystay sarkaal ka tirsan ciidamada booliska dowladda KMG Soomaaliya kaasi oo uu tilmaamay in uu six um ula dhaqmay.
Max’ed Mursal waxa uu xusay in uusan garaneyn sababta isaga loo jirdilay, waxaana uu tilmaamay in uu safar u ahaa wadanka dibadiisa islamarkaana uu fasax ka helay gudoonka sare ee Barlamanka.
Ugu dambeyntii ayaa xildhibaanku waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda KMG in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ciidamada dowladda ay kula kacayaan masuuliyiinta kale ee dowladda KMG.